“ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နေပြီ…” တဲ့ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
“ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နေပြီ…” တဲ့
အောက်တိုဘာ 31, 2018 Shinawatt Visutdiphat, M.D. Sukchai Satthaporn, M.D. Voratape Kijtavee, M.D.
မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့မှာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နေပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ တကယ့်ကို အိပ်မက်ဆိုးကြီး တစ်ခုပါပဲ။ ရင်သားမှာမှ လာဖြစ်ရတယ်တဲ့။ ခွဲရမယ်တဲ့။ ဖြတ်ထုတ်ရမယ်တဲ့။ ဒီလို ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ “ရင်သားကင်ဆာကို ဘယ်လိုကုကြမလဲ” ဆိုတဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် အကြောင်းအရာကလေးတွေကို ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်။ ဒီကနေ့ ခေတ်ပေါ် ရင်သားကင်ဆာ ကုသနည်းတွေ မြောက်မြားစွာရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာတော့ သူ့ အားသာချက်တွေ ရှိသလို အားနည်းချက်တွေလည်းရှိနေဆဲပါပဲ။ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တူညီတဲ့ ကုထုံးတွေ ရရှိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ရောဂါရာဇဝင်နဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဆရာဝန်က သင့်တော်တဲ့ ကုထုံးကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပေးပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကတော့ ခွဲထုတ်မယ်၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုပေးမယ်၊ ခီမိုဆေးပေးမယ်၊ ဟိုမုန်းကုထုံးတွေပေးမယ်၊ Targeted Therapy လို့ခေါ်တဲ့ ပစ်မှတ်ထားကုထုံး ဆိုတာလည်း ရှိတယ်။ အားလုံး ကုထုံး ၅ မျိုး ရှိပါတယ်။
The Intact™ Breast Lesion Excision System ဆိုတာနဲ့ VACNB ဆိုတာ ကုသပုံ ကုသနည်း ဘယ်လို တူတာလဲ ဆိုတာကို Dr. Voratape Kijtavee က ရှင်းပြပါတယ်။ ကုထုံး နှစ်မျိုးလုံးဟာ ရင်သားကို ခွဲရာသေးသေးလေးပေးပြီး အာလ်ထရာဆောင်းရဲ့ အကူအညီနဲ့ အသားစယူတဲ့ အပ်ကလေးကို ရင်သားထဲ ထိုးထည့်ပြီး အသားစနမူနာကို ထုတ်ယူပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို ရောဂါရှာဖို့ရော ကုသမှုပေးရာမှာပါ အသုံးပြုပါတယ်။ ရင်သားထဲက ကင်ဆာဆဲလ်လို့ ယူဆရတဲ့ အကြိတ်တွေကို ရှာဖွေတယ်၊ ဖယ်ထုတ်တယ် ပြီးတော့ ဆရာဝန်က အဲဒီနမူနာကို ဆန်းစစ်ပါတယ်။
(Intact™ Breast Lesion Excision System) ဖြင့် ခွဲစိတ်သည့်နည်းလမ်း
ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင် တစ်သျှူးနမူနာ ဝိုင်းဝိုင်းကလေး ရတယ်။ ဒီနည်းရဲ့ ကောင်းကွက်က ရိုးရှင်းတယ်၊ သေးသေးလေးပဲ ခွဲရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ထုတ်လာတဲ့ အသားစနမူနာယူရင်းတစ်ခါတည်းကုလို့ ရတယ်၊ အခြား ကင်ဆာအကြိတ်ခွဲထုတ်တဲ့ ကုသမှုတွေလိုပဲ မသင်္ကာတဲ့ အကြိတ်နဲ့ ဘေးပတ်ပတ်လည်က တစ်သျှူးတွေကို တစ်ခါတည်း ထုတ်ယူလာလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနည်းနဲ့ကုမယ်ဆိုရင် ရင်သားကင်ဆာအကြိတ်ဟာ ၁.၅ စင်တီမီတာထက် မကြီးမှဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပ်က ၂စင်တီမီတာဆိုက်အထိ စုပ်ထုတ်လို့ရပေမယ့် အကြိတ်တင်မကဘဲ ဘေးပတ်လည်းက တစ်သျှူးတွေကိုလည်း ယူရအုန်းမယ်လေ။ ဒါကြောင့် အကြိတ်ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ၁.၅ စင်တီမီတာလောက်ပဲ သင့်တော်ပါမယ်။ သူ့အားနည်းချက်က အကြိတ်ဟာ ရင်သားအရေပြား ဒါမှမဟုတ် ရင်အုပ်နံရံနဲ့ သိပ် ကပ်နေရင် ယူလို့ မရဘူး။
(VACNB) နည်းဖြင့် ခွဲစိတ်ခြင်း
ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင် တစ်သျှူးနမူနာ ချွန်ချွန်လေးတွေ ရတယ်။ အသားစနမူနာယူတဲ့ အပ်ကို အကြိတ်ထဲကို ထိုးထည်းပြီး လေစုပ်တဲ့နည်းနဲ့ စုပ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ နမူနာအများကြီး ယူလို့ရတယ်။ အပ်ထဲကို လေစုပ်တဲ့နည်းနဲ့ စုပ်ယူပြီး ဖြတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ ဖြတ်ချပေးခဲ့တာ။ ရိုးရှင်းပြီး အဆင်ပြေတယ်။ ဒီနည်းရဲ့ ကောင်းကွက်က ခွဲရာသေးသေးလေးကနေတစ်ဆင့် တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ အကြိတ်တွေကို ဆွဲထုတ်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ဆိုရင် ခွဲစိတ်မှု ကြီးကြီးမားမားတွေ လုပ်စရာမလိုဘဲ အကြိတ် သေးသေးနဲ့ ခပ်ကြီးကြီးတွေအထိ ဖယ်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ရင်သားထဲမှာ ပြန့်ပွားနေတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်များကို ခွဲထုတ်ခြင်း
“အမျိုးသမီးအများစုဟာ မူမမှန်တဲ့ကိစ္စတွေကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို ပုံမှန်မလုပ်ကြဘူး။ ပုံမှန်သာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကင်ဆာကို ကနဦးအဆင့် နဲ့ အဆင့် ၀ လောက်ကတည်းက သိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်တယ်။ အဆင့် ၀ ဆိုရင် နို့ကြောင်းထဲမှာ ခိုနေတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်ကို မိနိုင်ပြီး အခြား ရင်သားတစ်သျှူးတွေဆီ ပြန့်မသွားခင်မှာ သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာဆိုရင် ရင်သားကင်ဆာကို ရာနှုန်းပြည့် ကုသပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရင်သားတစ်ခုလုံး ဖြတ်ထုတ်ပစ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ပေါက်ဆိန်နဲ့ ပေါက်တဲ့အဆင့်အထိ မရောက်တော့ဘဲ အပ်နဲ့ ထွင်းတဲ့ အဆင့် မှာတင်ပဲ ပြီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ Dr. Shinawatt Visutdiphat က ဆိုပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ရင်သားတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုခွဲစိတ်ပေးမှုမျိုးကို အနှစ် ၂၀ လောက်လုပ်လာကြပေမယ့် ကျန်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ထပ် ဖြစ်မလာစေဖို့ ရင်သားတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်ထုတ်ပစ်မှ စိတ်ချရမယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆတစ်ခုဟာ ခုထိ ရှိနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒီခွဲစိတ်မှုဟာ ရိုးရှင်းပါတယ်။ တစ်ခုလုံးထုတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးလို ရင်သားကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးစရာမလိုဘူး၊ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ခွဲစိတ်ရမှု နည်းတဲ့အတွက် ကြောင့် မေ့ဆေးကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုလေးတွေလည်း နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲထုတ်တာနဲ့ ဖြတ်ထုတ်တာဟာ ရလဒ်ကတော့ အတူတူပါပဲ။ အရေးအကြီးဆုံးက ခွဲရုံပဲ ခွဲထုတ်တာဆိုရင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု ပေးကို ပေးရပါမယ်။ ကင်ဆာဆိုတာ တစ်သျှူးဖွဲ့စည်းပုံတွေကနေ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီးပြီဆိုရင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုက နောက်က လိုက် ကို လိုက်ရပါတယ်။ ဒါမှ ကျန်ခဲ့တဲ့ မူမမှန်ဆဲလ်တွေပါ သေ ကုန်ပြီး ပြန်ဖြစ် မလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုကို တစ်နေ့ ၁၅ မိနစ်ကြာနဲ့ ၂၅ ရက်ကနေ ၃၃ရက် အထိ နေ့စဉ် မှန်မှန် လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ က ခွဲပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုပေးတာ (ဓာတ်ကင်တာ) က ပို နာတယ် အချိန်လည်း ပိုကြာတယ် လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ခွဲထုတ်မယ့်အစား တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာက ရှင်းပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဟာ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပြီး သိပ်လည်း မနာတော့တဲ့ ကုသမှုတွေ ပေးနိုင်နေပါပြီ။ တစ်ချို့ဆို လုံး၀ မနာတော့ဘူးလို့တောင် ပြောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလိုအပ်တဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ မချမိစေဖို့ အထူးစဉ်းစားစေလိုပါတယ်။ ကိုယ်က ဘဝမှာ ဆက်ပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ရအုန်းမှာလေ…။
ခီမိုသရာဖီ ဆိုတာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ဆေးနဲ့ သတ်ပစ်တာဖြစ်ပြီး ထပ်ပြီး ပြန့်ပွားမလာအောင် ကာကွယ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက ကင်ဆာရဲ့ ဇီဝကမ္မလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ခီမိုသရာဖီကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနဲ့ တွဲဖက်ပေးလေ့ရှိပြီး ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း နောက်ဆက်တွဲ ကုထုံးတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ခီမိုဆေးသွင်းတယ် ဆိုတာ ကြွက်သားတွေထဲကို ထိုးထည့်တာ၊ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့နေရာကို သွေးကြောထဲကနေတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် ထိုးထည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောထဲ တိုက်ရိုက် ထိုးသွင်းတဲ့ ဆေး ရှိသလို သောက်ဆေးနဲ့ လူးဆေး တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အန်တာ၊ ဆံပင်ကျွတ်တာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာတွေဟာ ခီမိုသရာဖီရဲ့ လူသိများတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုမုန်းကုထုံးက ခွဲထုတ်ပြီးတဲ့နောက် ပြန်ဖြစ်မလာအောင် ကုတဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ အမျိုးသမီးဟိုမုန်း အီစထရိုဂျင်ဟာ ကင်ဆာဖြစ်တာကို အားပေးပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ ၃ ယောက်မှာ ၂ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ ဟိုမုန်း receptor တွေဟာ positive တွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အီစထရိုဂျင်ဟိုမုန်းကို တားဆီး ထားလိုက်ခြင်းဟာ ကင်ဆာတွေမလာနိုင်အောင် ကာကွယ်ထားနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကတော့ သောက်ဆေးလည်းရှိတယ် ထိုးဆေးလည်း ရှိပါတယ်။ တားဆီးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းသွားအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဓာတ်ရာင်ခြည်ကုထုံးဆိုတာကတော့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို အပြင်းစားရောင်ခြည်နဲ့ ထိုးပြီး သတ်ပစ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကို ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ပြန်ရည်ကြောအကျိတ်တွေမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ပြန်ဖြစ်မလာစေဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရင်သားတစ်ခုလုံး ဖြတ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက် ပြန်ရည်ကြောအကြိတ်တွေမှာ ကင်ဆာဆဲလ် ထပ်တွေ့တဲ့သူတွေနဲ့ ကင်ဆာအကြိတ် ၅ စင်တီမီတာနဲ့ အထက် တွေ့ရှိထားတဲ့ သူတွေမှာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကို အပြင်ကပေးတာ (external beam radiation) ရော အတွင်းကိုပေးတာ (brachytherapy) ပါ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာအပြင် အခြား လည်ချောင်းတို့ အရိုးတို့ စတဲ့ နေရာနဲ့ တခြားမှာဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာတွေမှာလည်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကို အသုံးပြုပါတယ်။
Target Therapy ပစ်မှတ်ထားကုထုံး
ပစ်မှတ်ထားကုထုံးကတော့ ရင်သားထဲက ကင်ဆာဆဲလ်သက်သက်ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ကုသပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆဲလ်တွေကို ကြီးထွားမလာစေဖို့နဲ့ ပြန့်မသွားစေဖို့ ဖမ်းထားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ကုတဲ့ ဆေးတွေက သိပ်မပြင်းတဲ့အပြင် ခီမိုသရာဖီနဲ့ မတူတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ပစ်မှတ်ထားကုထုံးမှာသုံးတဲ့ ဆေးတွေကို HER2/neu protein (ကင်ဆာကို ပိုပြီး ပြန့်ပွားစေတဲ့ ပရိုတိန်း)ကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ဆေး နဲ့ ဟိုမုန်းကုထုံးကို အားပေးတဲ့ ဆေး ဆိုပြီး ၂ပိုင်း ခွဲထားပါတယ်။ ဒီ ပစ်မှတ်ထားကုထုံးကို ရင်သားကင်ဆာအပြင် အဆုတ်ကင်ဆာ၊ အသည်းကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာ စတဲ့ အခြားကင်ဆာရောဂါတွေမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ရင်သားကင်ဆာကုထုံးများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုဖြစ်ဖွယ် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
“ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နေပြီ…” တဲ့ အမျိုးသမီးအများစုသည် မိမိတို့၏ရင်သား၌ အဖုအလုံးများ တွေ့ရှိခံစားမိပါက ခွဲစိတ်မှုကြီး ပြု လုပ်ရ တော့မည်ဟူ၍ စိုးရိမ်ပူပန်ပြီး အလွန်ချောက်ခြားတုန်လှုပ်သော အခြေအနေသို့ ဖြစ်သွား တတ်ကြ သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ထိုသို့ ခက်ခဲသောအချိန်နှင့် တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရ မည့် အမျိုး သမီးများအတွက်
User rating: 3.10 out of5with 10 ratings